बधाई छ !!! रमेश प्रसाईको जिन्दगीमा छोराको आगमन (सक्दो शेयर गर्नुहोस) – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : रमेश प्रसाई पनि बच्चाको बाबा बन्नुभएको छ बधाईको ओइरो लागेको छ ! रमेश प्रसाईकि श्रीमती बच्चाको आमा भएकी छिन । सामाजिक संजालमा सर्बाधिक हेरिने एक लोकप्रिय पात्रा हुन् रमेश प्रसाई । उनको बिचार नहेर्ने कमै छन नेपालमा।उनि सधै राम्रो बिचार र सबैको मन
Prevअण्डा खाएपछि भुलेर पनि खान नहुने यी २ चिज, नत्र पछुताउनु पर्ला !
Nextसातसय वर्षदेखि पुजिँदै खप्पर’
मन्त्रीलाई कोरोना पुष्टि, सैनिक अस्पताल भर्ना